भाग्य न्यौपानेको वि’रोध गर्नेलाई रबि लामिछानेले दिए यस्तो कडा ज’वाफ…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
काठमाडौ : केही दिन यता केयर बाल गृह की स’ञ्चालिका पुष्पा अधिकारीले एक बच्चाको नाटकीय उ’द्दार गरे पछि उनको वि’रोध भयो , त्यस्तै भाग्य न्यौपाने ले गरेको अन्तर्वत’लाई कतिपयले आलो’चना गरे,भने कतिपयले उनको समर्थन गरे ।
भाग्यको बि’रोध गर्ने लाई रबि लामिछानेले जाजरकोटबाट क’डा जवाफ दिएका छन् । हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै: समाजसेवा फेरी एक पटक विवा’दमा परेको छ । एक अना’थालय सञ्च’लिकाली नाट’कीय ढं”गले नव’जात शि’शु भेटाएको रा नक्क’ली उ’द्धार गरेको बारे पत्ता लागे पछि सबैजना उनी’माथि रा उनको भिडियो बनाउने माथि खनिएका छन् ।
राष्ट्रिय मिडियाको आफ्नै दम्भ छ ,फु’र्ती छ , युट्युव जस्ता माध्य’मबाट चिनिएका पत्रकारहरुलाई मुल’धारका पत्रकार हरू धारे हात लगाउँछन् , पत्रकार नै मान्दैनन् ,सञ्चार’कर्मी नै मान्दैनन् । कोही कोही त यो मान्छे नै मान्दैनन् । हो युटुबमा अ’तिरञ्ज ना छ । पैसा कमाउने प्रतिश्प’र्धा छ । घट’ना भन्दा टाइटल बिक्ने भन्दा टिक्ने खेलो छ ।
राम्रा र नराम्रा पक्ष कुन वि’धामा छैनन् ? मूलधारे मिडियाले कतिपय घटना र मान्छेलाई पटक्कै गन्दैनन् तर जनतालाई सूचना त चाहिन्छ । मनो’रञ्जन पनि चाहिन्छ । मुल’धारका मिडियाले सू’चना नदिए पछि आम मानिसहरू बाध्य भएर युट्युव लगाएतका मध्यहरुको भर पर्न विवस छन् ।
म अहिले जाजर’कोटमा छु , जाजरकोटका दरबार पछाडि छ । यही सोटीमा नवराज लगाएत का हरुको ह’त्या हुँदा आम मानिसलाई पल पल सूचना चाहिएको थियो । मुलधारका मीडिया कुर्ने धेर्य’ कसैलाई थिएन, त्यसैले सयौको संख्यामा आएका युट्युव चानेल हरू कै सूचनामा आम मानिस निर्भ’र भए ।
समाचार सम्प्रेष’ण मा प’रिपक्क नभएका नयाँ सञ्चार’कर्मीले स्वभावैले घ’टनालाई अति’रञ्जित बनाए त्यही कुरा मूल धारे मिडियाले पल पल मा अपडेट दिएको भए हुन्थ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन र आफूलाई उपस्थित गराउन नसकेका मूलधारे मिडियाहरुले युट्युव च्यानलका सन्चा’रकर्मीलाई सर’पी मात्र रहे । मुल”धारका मिडियाहरु अधिकांस राजनीतिक घटनालाई सम्प्रेष’ण गर्न बढी समय ख’र्च गर्छन् ।
जुन आम मानिसलाई फि’टिक्कै मन पर्दैन । त्यसका विकल्पका रुपमा युट्युव च्यानल उदाए । त्यसमा आलो’चना गर्नु पर्ने नै के छ र ? मन परेको च्यानल कतिले हेर्छन कतिले हेर्दैनन् ।कतिले मन पराउँछन् कतिले मन पराउँदैनन् , कसले कस्तो कस्तो प्रति’क्रिया दिन्छन् , यी सबै हेर्न पाउने प्ल्याट’फोम नराम्रो त हुँदै होइन ।
तर किन हो किन मुल’धारका सञ्चा’र क’र्मीलाई युटुब र लाई फु’टेको आँखाले पनि देख्न सक्दैनन् । चाहँदैनन् । मलाई लाग्छ यो इ’र्ष्या हो द’म्भ हो । कुण्ठा पनि हो । भ’र्खर प्रयोगमा आएका यस्ता माध्यम हरुलाई मुल’धारका सञ्चा’र कर्मीलाई स्वीकार्नु पर्छ । आज अपरिपक्क छन् भोलि परि’पक्क हुन्छन् भोलिका लागि सूचना र मनो’रञ्जनको लागि भरपर्दो माध्यम बन्दछन् जि’म्बेवार बन्दछन् ।
भाग्य न्यौपानेलाई झण्डै २ मिलियन ले हेर्दा रहेछन् । कुनै मुलाधरेलाई मन नपरेर हुन्छ र ? जनताले मन पराएको मान्छेलाई चिन्दा पनि चिन्दीन हेर्दा पनि हेर्दिन भनेर ढों’ग गरेर हुँदैन । एउटा दुइटा गल्ती सबैका हुन्छन । त्यत्रो मान्छेलाई स’हयोग गरेर त्यत्रो मान्छेको प्रि’य भएको मान्छेका विषयमा मू’ल धा”रले कहिल्यै नलेख्ने ।
कहिल्यै नबोल्ने । अनि जब उसको एउटा गल्ती हुन्छन् अनि १२ हात जति लामो आ’र्टिकल लेख्ने त ! भाग्य न्यौपाने पपु’लर रहेछ भन्ने कुरा उसले एउटा गल्ती गर्दा मात्र थाहा भयो ? उसले त्यत्रो फलो’अर्स कसरी कमायो भन्ने बारे पनि सोच्नु पर्ला नि ! शिशिर भण्डारी किश्ण कडेल त्यसै लोक प्रिय भएका होइनन् यिनीहरूले धेरैको जीवन बदलि’दिएको पनि छन् ।
संसारका धेरै विद्यालय अ’स्पताल हरू सहयोग बाटै बनेका चलेका छन्। एउटा पुष्प अधिकारीले ग’ल्ती गरेनन् भनेर समाजसेवा नै ग’लत भन्ने त’र्क सही होइन । अनुराधा कोइराला पुष्पा बस्नेत जस्ता महान नारीहरु पनि अरूको सहयोगमा स’त्कर्म गरिरहेका छन् ।
औंला उठाउन सजिलो छ काम गर्न गाह्रो छ । दिलशोभा श्रेष्ठले जस्तो अरुले फालेका त्यागेका बुढा बा आमा को दि’सापिसा’ब सो’हर्न सक्नुहुन्छ ? सायद आफ्नै बा आमाको पनि सक्नुहुन्न । कसैले सहयोगको राम्रो हिसाब किताब राख्न नजानेको हुन सक्दछन् । त्यसलाई सचेत बनाउने हो । अनु|गमन गर्ने निकाय ले क’डाईका साथ अनु’गमन गर्ने उस्तै परे कारबाही गर्ने ।
संगिता राना मगर , मेनुका थापा सुनिता दनुवार हरुले गरेको काम एक दिन मात्र पनि गर्न सकिँदैन । दीक्षा चापागाईं जस्तो बाटोमा किरा परेर लडेका मानिसहरूलाई बोकेर ल्याएर नुहाई धुवाई गरेर दि’शा पि’साब सोरेर दिन’रात से’वा गर्ने जो कोहीको बसको कुरा होइन ।
दिल खोलेर सहयोग गर्नु र वालेट खोलेर सह’योग गर्नु आकाश जमि’नको फरक छ । सामाजिक स’ञ्जालबाट सत्कारमा गरेका यी मानिस हरूलाई मानिसले त्यसै फलो गरेका होइनन् होला । हो पैसाका कुरामा पार’दर्शिता चाहिन्छ । त्यसमा सबैजना सचेत हुनु पर्छ । आप’त्तीजनक शैलीको लागि माफी माग्नुहोस् र सच्चिनु होस । सामाजिक स’ञ्जालमा लोक_प्रिय हरूलाई मूल|धारे सञ्चारक’र्मीले सौतेनी व्यवहार गर्नु अनुचित हुन्छ ।
यहाँ कोही कसैको प्रति’स्पर्धी छैन , यो आकाश यती विशाल छ की चराहरूले एक अ’र्कासंग ठोकिन्छ भन्ने पीर लिनै पर्दैन ।एउटा समुह छ जो आफैंलाई बौ’द्धिक घोष’णा गर्न लागि परेको छ ।यहाँ ट्वी’टरमा कमेन्ट गर्नेहरू स्टा’न्डर्डर मानिन्छन् । युटुबमा कमेन्ट गर्ने चाई चेतना नभएका मानिन्छन् ।
आम नेपाली मानिसहरू जुन प्लेट फ’र्म मा छन् त्यही लोक’प्रिय छ ।त्यसलाई दिल खोलेर स्वी’कार गर्नु पर्छ । जनताका मु’द्दा आमा मानिसको घट’ना जसले देखाउँछ , आम मान्छे त्यतै आक’र्षित हुन्छन् । नयाँ पत्रीका दैनिक ले जन चासोको विषयमा ध्यान दिन थाले पछि पछिल्लो दिनमा यसको लोक प्रि’यता कसरी बढेको छ । त्यो पनि भन्न छुताउँदिन ।
कसैले नमानेर नगनेर हुन्छ र । जनताले माने पछि सक्किगोनी । ग’ल्ती गरे पछि मात्र चिन्ने होइन , राम्रो काम गर्दा पनि चिन्ने गरौं । यत्रो आकासमा २-४ जना भाग्य न्यौपाने अटाउँछन् ।आबस्यकता भन्दा बढी निन्दा नगरौं । चन्दलाई ध¥न्दा चाई नबनाऔं । का’नूनी दा’यरामा ल्याऊ, पारदर्शी बनाऔं । मूल कुरा चाई एकले अर्काको अ’स्तित्व लाई सहर्ष दिल खोलेर स्वी’कार गरौं ।
भिडियो हेर्नुस् !
Previous रमा ओलि भन्नुहुन्छ : ११ जना बच्चाहरूलाई पुन पुष्पा अधिकारीको केयर बाल गृ’हमा ल्याएर छोडियोस ! सहि या गलत आफ्नो बिचार राख्नुहोस् ।
Next भाग्य न्यौपाने यो देशको हिरो हो भन्दै डा सुरेन्द्र केसीले दिए क,डा जवाफ:भाग्य न्यौपानेले जस्तो गरेर देखाउ : डा केसि
टिकाराम भट्टराई भन्नुहुन्छ : यदि प्रधानमन्त्री ओलिले चाहेमा वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ, धा’रा ७६ को ९ ले…हेर्नुहोस् ।
नियमित प्रक्रिया मिचेर नयाँ मुख्य सचिव बनाइँदै…हेर्नुहोस् ।
भोलिबाट लामो दुरीका रुटमा पनि बस संचालन गर्दै साझा यातायात…हेर्नुहोस् ।
अक्टोबर देखि दोहा, कुवेत र रियादमा पनि नियमित उडान हुने…हेर्नुहोस् । (तालिकासहित) सेयर गर्नुहोस् ।
आखिर विद्युत् प्राधिकरको पुन: नियुक्ति लागि कुलमान घिसिङलाई कस्ले रोक्यो त…हेर्नुहोस् ।